Qiimaha agabyada lacagta: Maamuus Earbuds Magic iyo MagicWatch 2 | Androidsis
Qalabka Qiimaha-Lacagta: Honor Magic Earbuds iyo MagicWatch 2
Markan waxaan kuu keenaynaa tijaabo laba jibaaran oo ay ku jiraan laba ka mid ah waxyaabaha xiisaha badan ee xiisaha leh ama kaabayaasha marka loo eego qiimaha ay u leeyihiin lacagta aan ku aragnay suuqa. The wearables Iyaguba waa qayb aad muhiim ugu ah tiro badan oo isticmaaleyaal ah, gaar ahaan haddii aan diiradda saarno saacadaha casriga ah iyo dhagaha dhagaha ee 'True Wireless headphones'.
Waxaan tijaabinaynay 'Honor Magic Watch 2' (42mm) iyo Magic Earbuds waxaanan kuu sheegaynaa khibradayada. Baro nala soo xiriir wax walboo aan kuu sheegeyno oo ku saabsan badeecooyinkaan cusub ee Sharafta iyo sida ay noloshaada ugu fududaan karaan.
Sida had iyo jeer ah, waxaan ku xusuusinaynaa inaad xagga sare ka heysato fiidiyowga kanaalkayaga YouTube-ka oo ah meesha aan sida ugu fiican uga soo qaadnay labadan alaab ee Sharafta leh iyo halka aad ka arki karto sida ay ugu shaqeeyaan waqtiga dhabta ah. Waxaan ku xusuusinaynaa inaad isdiiwaangelin kartid si aad ucaawiso bulshada Androidsis inaad sii wadato koritaanka oo aad nooga tagto wax la mid ah haddii aad ka heshay. Haddii cagsigeeda horay loo go'aansaday, waad awoodaa HALKAN KA IIBSO cusub Honor MagicWatch 2 oo ah qiimaha ugu fiican.
1 Maamuus MagicWatch 2
1.1 Naqshadeynta iyo qalabka
1.2 Faahfaahinta farsamada
1.3 Muujin iyo hawlgal
1.4 Is-maamul iyo ra’yi
2 Maamuus Earbuds sixir
2.1 Naqshadeynta iyo qalabka
2.3 Interface user
2.4 Tayada codka iyo baajinta dhawaaqa
2.5 Is-maamul iyo adeegsi
Maamuus MagicWatch 2
Ku saabsan cabirka 41,8 x 41,8 culeys qiyaastii ah 29 garaam oo aan lahayn suunka, Waxaan fursadan uga faa'iideysaneynaa inaan xasuusano inay ka sameysneyd bir isla markaana ay biyaha hoostooda ku jiri doonaan ilaa 50 mitir ama 5 jawi oo biyo ah. Waxaan isla markiiba ka helnay u ekaanta "walaalkeed" Huawei Watch GT 2, si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo fudeyd iyo raaxo moodel iswaafajsan.
Saacaddu waxay isu rogtay mid si wanaagsan loo dhisay oo guud ahaan aad u deggan, in kasta oo ay xoogaa dhaqaaqdo inta ay cayaaraha samaynayso.
Dhanka qalabka, waxaan leenahay processor noo gaar ah Huawei Kirin A1. Waxay kaloo leedahay teknolojiyad wireless ah Bluetooth 5.1 BLE / BR / EDR sidoo kale waxay leedahay GPS isku dhafan, GLONASS iyo nidaamka Galileo. Waa inaanan ilaawin inaan sidoo kale leenahay xiriir WiFi ah si aan saacadda uga dhigno mid dhaqso badan.
Uma baahno dareemayaal sidoo kale: Accelerometer, gyroscope, magnetometer, dareemayaasha indhaha ee qiyaasta garaaca garaaca wadnaha, cabirka iftiinka deegaanka iyo barometerka. Dabcan, waa shey si isku mid ah wax u taraya oo naga caawin doona inaan ilaalino waxqabadka jireed iyo xakameynta caafimaadkeena.
Muujin iyo hawlgal
Waxaan haynaa smartwatch gabi ahaanba wareegaya oo ku dhejinaya guddi 1,20-inch AMOLED, ma ahan wax yar, laakiin xoogaa way ku kala duwan tahay 1,39 inji oo ah nooca isla markiiba ka sarreeya 46-milimitir.
Intaa waxaa dheer Waxaan haysannaa ikhtiyaar "had iyo jeer saaran" si aan u aragno shaashadda mar walba. Qeyb ahaan Lite OS, nidaamka qalliinka saacaddu waa mid waafajinaya inkasta oo uu dhexgalka xaddidan la leeyahay ogeysiisyada.
Is-maamul iyo ra’yi
Shirkaddu waxay bixisaa illaa 7 maalmood oo la adeegsado iyada oo la kormeerayo heerka garaaca wadnaha. Imtixaanadayda waxaan awooday inaan gaaro lix maalmood anigoon timahayga qasan.
Si la mid ah, waa in la ogaadaa inaan awoodno muhiimad ahaan la soco lix nooc oo xog ah: talaabooyin, jimicsi, garaaca wadnaha, hurdo, culeys, iyo diiqad. Waxaad hadda ka iibsan kartaa bogga rasmiga ah ee Sharafta leh 139,90 yuuro (LINK) ama Amazon on 159,99 yuro (LINK)
Miisaanka dhegaha kasta miisaankiisu waa 5,4 garaam (waxay la mid tahay AirPods Pro tusaale ahaan) waxayna leeyihiin suufyo kala duwan oo leh cabirro la qabsan karo. Waxay si sax ah ugu habboon yihiin dhegta oo si fudud uma dhacayaan. Haa runtii, iyagu ma haystaan ​​nooc shahaado oo la xiriira caabbinta biyaha.
Sanduuqa (oo ay ku xiran tahay USBC) qaybtiisa waa mid raaxo leh oo ka samaysan waxyaabo dhalaalaya. Waa isafgarad iyo fududahay in la raro, taas oo aan u arkay inay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah.
Isku xirnaantu aad ayey muhiim ugu tahay nooca noocan ah, arrinta aan hayno Bluetooth 5.0 taas oo hubin doonta isku xirnaanta otomaatiga ah, in kasta oo doorka halkan ku qaatay arjiga la socda ee ay Huawei ka heli karto Google Play Store uu si gaar ah khuseeyo.
Waxaa jira seddex qaab oo xiriir:
Dhaqameed: Fur kiiska oo dhagsii badhanka lammaanaha si ay uga dhex muuqdaan menu-ka Bluetooth.
Iyada oo loo marayo Nolosha AI ee Huawei: Codsigu wuxuu ogaan doonaa samaacadaha dhagaha wuxuuna noo ogolaanayaa inaan qaabeyno dariiqooyinka, tilmaamaha iyo awoodaha kale sida batteriga.
EMUI 10: Qalabka Honor ama Huawei ee leh EMUI 10 waxay leeyihiin HiPair, taas oo ah isku xirnaanta degdegga ah ee Huawei oo leh shaashad soo-bax ah.
Aragtidayda waa mid aad u khuseysa in la rakibo arjiga.
Si aan ugu shaqeyno samaacadaha dhagaha waxaan sameyn karnaa labalaab deg deg ah ama aan qaban karnaa saxaafad dheer, taas oo ka dhalan doonta mid ka mid ah falalka aan u qaabeynay:
Cayaar / hakad
Dhaqaaq kaaliyaha codka asalka ah
Sidee ayey u noqon kartaa si kale, sameecadaha dhagaha ayaa sidoo kale leh nidaam lagu ogaanayo marka aan iska fogeyno Runtiina markaan dhejinayno, qaabkan ayaa hakad gelin doona ama bilaabi doona muusigga.
Tayada codka iyo baajinta dhawaaqa
Kuwani Earbuds Magic waxay soo bandhigaan nidaam joojinta buuqa isku dhafan, Natiijadu waa baajinta dhawaaqa oo debciya dibedda, laakiin way ka fog tahay inay si buuxda noo go'doomiso. Shaqadani waa la shaqeysiiyay oo waa la joojiyay iyadoo lagu haayo saxafad dheer headset-ka la xushay.
Waxaan haynaa kala soocid qalab aan shaqsiyan aad u jeclaa. Waxay bixiyaan dhawaq aad u tayo sareeya, qaasatan hadaan tixgalino qiimaha sheyga. Way cadahay inay ka fog yihiin alaabooyinka "premium", laakiin marka loo eego qiimaha ay leeyihiin, waxay ila muuqatay inay ka badan yihiin u hogaansanaanta.
Is-maamul iyo adeegsi
Marka laga hadlayo madax-bannaanida, laga yaabee inaysan ahayn qodobka ugu xusida badan, ilaa laba saacadood oo muusig loo maqlayo sii waday la joojinta buuqa iskudarsan ee firfircoon, wax ka sii badan haddii aan ka fureyno.
Makarafoonka wicitaanada, Sida aad ku arki karto fiidiyowga, waxay bixisaa natiijooyin aad u wanaagsan, imtixaannadeennana ma aanan helin wax dhibaato ah oo aan ku wici karno xitaa deegaannada leh buuq badan. Kani waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu go'aan qaadashada badan ee sameecadaha dhagaha oo waxaan dhihi karnaa 'Honor Magic Earbuds' ayaa uga adkaaday si fudud oo laga yaabo inaynaan ka fileyn wax soo saar leh qiimahan.
On bogga sharafta laga bilaabo € 79,90> LINK
On Amazon laga bilaabo € 116,00> LINK
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Qalabka Qiimaha-Lacagta: Honor Magic Earbuds iyo MagicWatch 2
Abuur batoon toobiye ah si aad uga nadiifiso taariikhdaada baalashada Google Chrome
Daabacaadda 12GB RAM ee Realme X3 waxaa xaqiijiyay Geekbench